kham၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
kham သည်thein wai's ၏ 'ပါချုပ်ဆရာတော်၏ ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ဖို့နည်း။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်Thein Naing Ohn's ၏ 'ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုလေ့လာခြင်း (၁)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်Thein Naing Ohn's ၏ 'လေ့လာမိသမျှ စိတ် စေတသိက်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ (၈)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi သည်khamကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
kham သည်လှိုင်ကျော်ထွေး's ၏ 'ဓမ္မသံဝေဂ လင်္ကာများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
wai mon သည်khamကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"kham အမ လာလည်တယ်နော်။ အမ အလုပ်များနေလို့ မရောက်ဖြစ်တာပါ။ မိတ်ဆွေအားလုံးကို သတိရပါတယ်။ စာ ချက်ခြင်းမပြန်ဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ အခုမှလိုင်းတက်ဖြစ်လို့ပါ။ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။"
kham သည် မူကြိုဆရာ's၏ '"Wonderful Dharma" " မြင့်မြတ်ဖြူစင် သည့် ဓမ္မ"'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
kham သည်မူကြိုဆရာ's ၏ '"Wonderful Dharma" " မြင့်မြတ်ဖြူစင် သည့် ဓမ္မ"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'ရဟန်းနှင့် အမျိုးသမီး(၂)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'ရဟန်းနှင့် အမျိုးသမီး(၁)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်U Tun Hla's ၏ 'မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သံဝေဂဓမ္မတရားအစု(၂)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်nyansoe's ၏ 'လူဖြစ်ကျိုးနပ်စေရန် ဘယ်လိုအတွေးမျိုး တွေးရမလဲ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်thein wai's ၏ 'လိုအပ်နေတဲ့အရပ်ကို ရောက်စေချင်ပါတယ်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'မြင့်မိုရ်တောင်ထက်သာပါတယ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်thein wai's ၏ 'ပရိယတ်ကို အခြေခံရန် အရှင်ဇနကာဘိဝံသဆရာတော်ကြီး၏ အဆုံးအမ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်Ven. Vunna's ၏ '"မြစိမ်းက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
1:13am အချိန်အောက်တိုဘာ 24, 2014, တွင် ပိန်ဖောင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:28pm အချိန်စက်တင်ဘာ 26, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:48pm အချိန်ဇွန် 12, 2014, တွင် wai mon မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အမ လာလည်တယ်နော်။ အမ အလုပ်များနေလို့ မရောက်ဖြစ်တာပါ။
မိတ်ဆွေအားလုံးကို သတိရပါတယ်။ စာ ချက်ခြင်းမပြန်ဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
12:38am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 18, 2013, တွင် ရှင်ပညာဇောတ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:30am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 18, 2013, တွင် ရှင်ပညာဇောတ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:36pm အချိန်စက်တင်ဘာ 26, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:33pm အချိန်စက်တင်ဘာ 11, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အမေး။ ။ဆရာတော်ဘုရား…. တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဘုရား…မြတ်စွာဘုရားရှင်က မာဂဓဘာသာစကားနှင့် သတ္တ၀ါများကို တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်ဘုရား….။ တပည့်တော်သိချင်တာက မာဂဓဘာသာစကားနှင့် ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်များကို ပါဠိဘာသာစကားသို့ အဘယ်အချိန်က ပြောင်းလဲခဲ့ပါသလဲ ဆိုတာ အဖြေပေး တော်မူပါဘုရား………..။
အဖြေ။ ။ဘုရားရှင်ဟာ မာဂဓဘာသာစကားနှင့် တရားဟောတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ မေးခွန်းရှင်စိတ်ထဲမှာ မာဂဓဘာသာကနေ ပါဠိဘာသာကို ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ ထင်နေတယ်။ အမှန်က ပါဠိဘာသာစကားဆိုတာလည်း မာဂဓဘာသာစကားပါပဲ။
ဆက်ပြောဦးမယ်၊ ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်းအပါအ၀င် ထိုအချိန်က အိန္ဒိယတစ်ပြည်လုံးမှာ သက္ကတဘာသာ။ ပြာကရိုက်ဘာသာ၊ မာဂဓဘာသာစကား သုံးမျိုးကို အရပ်သုံးဘာသာစကားအနေနဲ့ သုံးစွဲပြောဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထီးသုံးနန်းသုံး စကားအဖြင့် သက္ကတဘာသာကို သုံးစွဲကြတယ်၊ ပြာကရိုက်ဘာသာစကားကိုတော့ အထက်တန်းလွှာက သုံးကြတယ်။ လူတန်းစားအားလုံး သုံးကြတာက မာဂဓ ဘာသာစကားဖြစ်တယ်။
မာဂဓဘာသာစကား (ပါဠိဘာသာစကား)ဟာ အက္ခရာအနေနဲ့ မရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် မာဓဂ (ပါဠိ)ဘာသာစကားကို ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏ အက္ခရာနဲ့ ရေးထားတာ ရှိသလို ရောမ အက္ခရာ၊ဂျာမန်အက္ခရာ၊ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနဲ့လည်း ရေးလို့လည်း ရပါဘယ်။ အဘယ်လူမျိုး အဘယ်အက္ခရာမဆို ရေးလို့ရပါတယ်။ မာဂဓဘာသာ(ပါဠိ)ဘာသာစကားကို မြန်မာအက္ခရာနဲ့ ရေးလို့ ရတဲ့အတွက် ပိဋကတ်သုံးပုံကို မြန်မာအက္ခရာဖြင့် ရေးထားတဲ့ ပါဠိတော်တွေလည်း ယခုအချိန်မှာ တွေ့မြင်နေရတာပါပဲ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပါဠိဘာသာစကားကို ပါဠိအသံထွက်အတိုင်း အဘယ်အက္ခရာနဲ့ပဲဖြစ်စေ ရေးထားတဲ့ ပိဋကတ်တော်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖေါ်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
11:46pm အချိန်သြဂုတ် 21, 2013, တွင် ၄၄၂ ဇော်ဇော်နိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:11pm အချိန်ဇူလှိုင် 16, 2013, တွင် Tun Tun Win မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:02pm အချိန်ဇူလှိုင် 13, 2013, တွင် ၄၄၂ ဇော်ဇော်နိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။